DIGREETO-Madaxweyne Denni oo xil u magacaabay masuul ka soo goostay Somaliland, shacabka oo hadal haya & Hargaysa oo ka walaacsan go’aamada Warsangeli.
July 18, 2019 puntlandnews 0
Dikreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa guddoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag loogu magacaabay Cali Xuseen Maxamed (Cali Soomaali) oo siweyn looga yaqaan gobolka Sanaag. Sidoo kale guddoomiye ku xigeenka […]
XOG-Muxuu salka kuhayaa go’aan MD Puntland ku joojiyey kantaroolkii Bixin, cadaadis reer Sool mise dhowr deegaan.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Xeer Madaxweyne Lr 03, ee 17ka Luulyo 2019, wuxuu ku joojiyay dismeyaasha iyo deegaamaynta Dhul-daaqsimeedka Dooxooyinka Waw iyo Bixin ee u dhexeeya Garoowe iyo Buuro wadal. Madaxweynaha […]
Ciidanka Somaliland oo gacanta ku dhigay gaari hub sida oo xildhibaan leeyahay kuna sii jeedey dhanka Sanaag.
Puntlandnews.net (Laascaanood)-Wararkii ugu dambeeyey ee ay helayso shabakadda wararka ee Puntlandnews ayaa sheegaysa in ciidanka Somaliland ay qabteen gaari, hub iyo rasaas. Gaarigaan oo ahaa nooca loo yaqaan Laylada isla markaana ka soo kicitimay dhanka […]
Hargaysa oo ka argagaxday tallaabo Farmaajo qaaday codsina u dirtay Muqdisho iyo caalamka.
Somaliland ayaa War kasoo saartay Guddigii uu shalay Magacaabay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee loo xil saaraay Wada hadaladda Soomaaliya iyo Somaliland. Somaliland ayaa sheegtay in guud ahaan aysan aqbali doonin in ay la […]
XOG-Yaa ka dambeeyey in Caarre ka boxo Puntland, mala cayriyey mise waa rabitaankiisa, masuul PL ah ayaa fashiliyey.
Punlandnews.net (Garoowee)-Kadib muddo sanad ka badan oo ay ku sugnayd Puntland Jabhaddii dulmi diidka Soomaaliland ee corneal Caarre ayaa waxa ay isaga baxday guud ahaanba deegaamada Puntland. Ciidamada jabhadda Caarre oo wata gaadiidka dagaalka ayaa […]
Jubbaland oo awaamiirtii ugu cuslayd ku dhawaaqday iyo musharixiintii oo lacagihii ugu badnaa la duldhigay.
Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuduudaha iyo Doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa Maanta soo badhigay jadwalka diiwaan galinta & shuruudaha laga doonayo Musharixiinta u tartameysa xilka Madaxwaynaha Jubbaland Qoraal ay soo saareen guddiga ayaa lagu sheegay […]
VIDEO: Puntland iyo Somaliland oo magtii ugu badnayd kala qaatay, masuuliyiin ku sugan goobta & SL oo balanqaaday inuusan dagaal dambe dhicin.
Puntlandnews.net (Laascaanood)-Maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa ay kula kala wareegeen magtii ugu badnayd oo labada dhinac ay kala qaataan, waxaana goobta ku sugnaa xubno ka socda labada dhinac. […]
Muuse Biixi iyo beeshiisa oo walaacsan xilli Corneal Caarre & beeshiisu ay hubkii ugu badnaa…
Todobaadyadii la soo dhaafay ayay ahayd markii beesha baho biciide ay wareejiyeen hubkii iyo gaadiidkii ay kula dagaalameen taliye caare iyo beeshiisa, hubkaas oo ahaa gaadiid iyo tikniko oo markaasi laga daawanayay warbaahinta somaliland sidii […]
DAAWO-Madaxweyne Denni oo kala diray madaxdii gobolada Sanaag iyo Haylaan magacaabayna shaqsiyaad Somaliland ka naxday.
Puntlandnews.net (Garoowe)-Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Denni ayaa waxa uu xilalkii kaga qaaday dhammaan guddoomiyayaashii iyo guddoomiye ku-xigeenadii Sanaag iyo Haylaan. Madaxweynaha ayaa waxa uu masuuliyiin cusub u magacaabay guddoomiyayaal […]
Ciidamadii ugu badnaa oo soo galay gudaha magaalada Galkacyo iyo Galmudug oo saaka raaf bilowday.
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno koonfurta Magalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi ay howlgallo ka wadaan Ciidamada Ammaanka Magaaladaas, kadib markii xalay lagu dilay mid ka mid ah […]
DAAWO-Maxkamadda sare ee Puntland oo war ka soo saartay kiiska Caasha Ilyaas.
Maxaa kajira in ciidamo Daraawiish ah ay Puntland soo dhoobtay Galkacyo & in xaalad deg deg ah la gelinayo.
DEG DEG-Madaxweynaha oo amray in la sii daayo labo maxbuus oo xirnaa kadib kacdoon shacabku sameeyeen.
WAR DEG DEG AH-Puntland oo hadda shaacisay haddii la celinayo lacagtii 220,000 kun ee Khayre siiyey garoonka Galkacyo & in la dayn doono.
Sawirro-Dhaqdhaqaaqyo ka socda Jiidaha hore iyo ciidanka oo bilaabay howlgalkii xoraynta.
DEG DEG+DAAWO: Deni oo amarkii u dambeeyey bixiyey, Axmed Madoobe oo culeys fuulay & Galmudug oo ku dhagtay Kheyre
TOP NEWS-Xiisad culus oo caawa ka taagan magaalada caasimadda ah iyo Khayre oo ka dambeeya.
Sawirro-Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo saaka ka socda jiidaha hore iyo cabsi tagaal oo ka taagan.
DAAWO-Mudaharaad ka dhan ah Somaliland oo ka dhacay Caynaba iyo shacabka oo afka furtay adkaysanna waayey.
Sawirro-Kacdoon ka dhan ah Muuse Biixi oo ka bilowday Caynaba iyo shacabka oo waddooyinka xiray mudaharaadyana wada.
Muuse Biixi oo afka furtay,”Farmaajo wuxuu nagu sameeyey cunsuriyad aanaan 28 sano arag adduunkiina waa naga xiray”.
Xildhibaanadii Beesha Isaaq oo Muqdisho kaga dhawaaqay hanjabaad ku socota Farmaajo iyo Khayre,”Wax markab xoolo sid ah ma aysan fasixin waa cadaw”.